Art is My Life: ဒိုက်နမိုက် နှင့် ဓာတ်ပုံ
ဒိုက်နမိုက် နှင့် ဓာတ်ပုံ
ဒီဇင်ဘာ ညတစ်ည ဖြစ်သောကြောင့် တောင်ပေါ်မြို့လေးကို မြူနှင်းများက လွှမ်းခြုံထားသည်။
ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် တစ်ရောက်တည်း ငုတ်တုပ်ထိုင်နေသည်။ ကျွန်တော့်ဘေးမှာ အဖော်ဆိုလို့ ဈေးပေါပေါ ပေးရသည့် တရုပ်ဘီယာ ပုလင်းများသာရှိသည်။
ကျွန်တော်သည် အဝေးက မာကျူရီမီးတိုင်များကို လှမ်းကြည့်ရင်း၊ လက်ထဲမှ ဘီယာပုလင်းကို မော့သောက်ရင်းဖြင့် တစ်စုံတစ်ခုကို စဉ်းစားနေသည်။ ထိုသို့ အဝေးမှ မာကျူရီမီး တိုင်များကို လှမ်းကြည့်နေစဉ် နှင်းမြူများကြားမှ မဲမဲ အရိပ်တစ်ခုက ရွှေ့ရှားလာသည်။ အဝေးမှ မသဲမကွဲ မြင်ရတော့ လူရိပ်သည် ထောင်ထောင် မောင်းမောင်းနှင့် အရပ်ရှည်ရှည် လူတစ်ယောက် ဖြစ်ဟန်တူသည်။ ထိုလူသည် ကျွန်တော်ရှိရာသို့ ဦးတည်ပြီး လာနေသည်။
သေချာ သဲသဲ ကွဲကွဲ မြင်ရတော့ ထိုလူသည် နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်ဖြစ်နေသည်။ သူ၏ လက်ထဲတွင် မြန်မာ ဘီယာ ပုလင်းတစ်လုံးကို ကိုင်ထားသည်။
Can I sit ?
နိုင်ငံခြားသားက ကျွန်တော်ဘေးမှာ ထိုင်ဖို့ ခွင်းတောင်းသည်။
ထိုင်နိုင်ပါတယ်လို့ ပြောတော့ ကျွန်တော့် ဘေးနားလေးမှာ ၀င်ထိုင်သည်။
ထို့နောက် ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နှင့် တစ်စုံတစ်ခုကို ရှာဖွေနေသည်။ ကျွန်တော်က အလိုက်သိစွာဖြင့် သူ့ဘီယာ ပုလင်းဖုံးကို ပါးစပ်ဖြင့် ကိုက်ဖွင့်ပေး လိုက်သည်။ သူတော်တော် လေးသဘော ကျသွားပြီး ကျွန်တော် အဖုံးဖွင့်ပေးလိုက်သော ဘီယာပုလင်းကို မော့သောက် လိုက်သည်။
“မြန်မာလို ပြောတတ်လား ”
“အန် ... မြန်မာပါဆို မြန်မာလို မပြောတတ်ပဲနေမလား”
“ နိုး . . နိုး ..၊ ဒီမှာက တိုင်းရင်းသားတွေ များတော့ တချို့ ကမြန်မာလို မပြောတတ်ကြဘူးလေ အဲဒါကြောင့် မေးကြည့်တာပါ”
“ကျွန်တော်လဲ ခင်ဗျားလို ဧည့်သည်ပဲ”
စောစောက ဖောက်လိုက်တော့ မြန်ဘီယာ ပုလင်းအဖုံးလေးကို ကျွန်တော် လက်သည်းနှင့် ခြစ်ပြီး အဖြူဖပ်လေးကို ခွာလိုက်သည်။ အဖြူဖပ်လေး ကွာသွားတော့ ကရ၀ိက်ပုံလေး ပေါ်ထွက်လာသည်။ ကျွန်တော် ချက်ခြင်းပဲ ထို အဖုံးလေးကို ညစ်ကွေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် အဝေးကို တစ်ခါတည်း ကန်လွင့် ပစ်လိုက်သည်။
“ ဟေ့ မဲပေါက်တယ် မို့လား ဘာဖြစ်လို့ လွင့်ပစ်လိုက်ရတာလဲ”
နိုင်ငံခြားက ကျွန်တော့်ကို မေးသည်
“ အဲဒီ ပုံကိုကရ၀က်ကို မကြည့်ချင်လို့”
ကျွန်တော် ဘီယာပုလင်းကို တကြိုက်မော့သောက် လိုက်သည်။ သူလဲ သူ့လက်ထဲက ဘီယာ ပုလင်းကို မော့သောက်ပြီး ကျွန်တော် ဘာပြောမလဲ ဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကျွန်တော့်ကို စောင့်နေသည်။
“ ဒီလိုဗျာ လွန်ခဲ့ ရက်ပိုင်းလောက်က အဲဒီကရ၀ိက်ပုံ နောက်ခံပါတဲ့ ပုံတစ်ပုံကို ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တယ်”
“အဲပုံကို မသာမာသူတစ်ယောက်က တခြားနေရာမှာ တလွဲ သုံးလိုက်တယ်”
“ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ ပုံထဲမှာ ပါတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ တခြားသူငယ်ချင်း တွေအတွက် စိတ်အနှောက် အယှက် ဖြစ်ရတာပေါ့”
“ဟား . ... ဟား .....”
နိုင်ငံခြားက ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ထရယ်သည်။ ကျွန်တော် နေရာမှာ စိတ်တိုတတ်သူ တစ်ယောက်သာ ဆိုလျှင် ထိုမျက်နှာကို ဘီယာနှင့် ပက်ပြီး ခေါင်းကို ပုလင်းဖြင့် ရိုက်ခွဲလိုက် မလားမသိ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သူ့ရယ်သံ ဆုံးအောင် ခဏလောက် စောင့်ကြည့်လိုက်သည်။
“တချိန်တုန်းက ငါက ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုနဲ့ တီထွင်ခဲ့ဖူးတယ်”
“ဒါပေမယ့် လူတွေက အဲပစ္စည်းကို တခြားနေရာမှ သုံးကြတယ်”
“အဲပစ္စည်းကို ငါတီထွင်ခဲ့တာကြောင့် ငါ့ရဲ့ အဖေ ခြေထောက် တစ်ဖက် ပြတ်သွားပြီး၊ ငါ့ရဲ့ အချစ်ဆုံး ညီ အပါအ၀င် လူအမြောက် အများ သေကြေခဲ့ရတယ်”
“ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားက ဒိုင်းနမိုက် ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့လူပေါ့”
“ဘာ! ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားက Nobel ပေါ့။ ဟုတ်လား”
“အင်းဟုတ်တယ်၊ ငါက ဒိုက်နမိုက် ကိုတီထွင်တယ်ဆိုတာ။ ကျောက်ဆောင်ကြီးကို ဖြိုတာတို့၊ တတာဟောင်းတို့၊ အဆောက်အဦး အဟောင်းတို့ကို ဖြိုဖျက်တဲ့ နေရာမှာ သုံးဖို့ တီထွင်ခဲ့တာ။ လူတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သတ်တဲ့နေရာမှ အသုံးပြုဖို့ မဟုတ်ဘူး”
“ကျွန်တော်လဲ အဲဓာတ်ပုံကို ရိုက်တယ်ဆိုတာ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် အမှတ်တရ အနေနဲ့ ရိုက်ခဲ့တာ၊ တခြားနေရာမှာ အသုံးချဖို့ မဟုတ်ဘူး”
“ ဒါပေမယ့် လူတွေက အဲဒီ ဒိုက်နမိုက်ကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သေအောင် သတ်တဲ့ စစ်ပွဲတွေမှာ ဖောက်ခွဲ ရေးပစ္စည်း တစ်ခု အဖြစ် အသုံးပြုနေကြတယ်”
“ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ ပုံကလဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မန်မာနတွေနဲ့ လက်စားခြေတဲ့ပွဲမှာ လက်နက်တစ်ခု အဖြစ် အသုံးပြုခံလိုက်ရတယ်”
“အရင်က လူတွေကို အဲလောက်ထိ ရက်စက်လိမ့်မယ်လို့ မထွက်ထားမိခဲ့ဘူး”
“ကျွန်တော်လဲ လူတစ်ချို့ဟာ အဲလောက် အောက်တန်းကျ လိမ့်မယ်လို့ ထင်မထားခဲ့မိဘူး”
“အဲလို ထင်တာမှားတာပဲ၊ အဲလို တလွဲသုံးစွဲမှုကြောင့် ငါ့ရဲ့ ညီအပါဝင် လူပေါင်းများစွာ သေကြေခဲ့ရတယ်”
“အဲဒီပုံကို တလွဲနေရာမှ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်ရဲ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် အပါဝင် သူငယ်ချင်းတွေကို စိတ်အနှောက်ယှက် ဖြစ်စေခဲ့ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲခဲ့ရတယ်”
“ငါဟာ အဲဒီ ဒိုက်နမိုက်ကို လူသတ်လက်နက်ဖြစ် အသုံးပြုဖို့ တီထွင်ခဲ့တာလို့ လူတစ်ချို့က ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ ငါဟာ လူသတ်လက် နက်အဖြစ် အသုံးပြုဖို့ တီထွင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ လူတစ်ချို့က လူသတ်လက်နက်အဖြစ် အသုံပြုကြတာ”
“ကျွန်တော့်ကို လူတစ်ချို့က နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ ထိုးဖို့ ရိုက်ခဲ့တာလို့ ထင်ကောင်း ထင်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဓာတ်ပုံကို မာန်မာနခြင်း ပြိုင်တဲ့ပွဲမှာ လက်နက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးခြဖို့ ရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ”
“ ငါက တလွဲ တွေးနေတဲ့ လူတွေကို သတင်းစားရှင်းလင်းပွဲ ကြီးလုပ်ပြီး ... ကျွန်တော်ဟာ ဒီပစ္စည်းကို လူသတ်လက်နက် အဖြစ် အသုံးချဖိုပ တီထွင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား ဆိုပြီး ရှင်းပြနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငါ တီထွင်ခဲ့တဲ့ ဒိုက်နမိုက်ကြောင့် လူပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ပြီးပြီ။ရှင်းပြနေလဲ ငါ့မှာ အပြစ်မရှိ ပါဘူးလို့ပဲ ပြောလို့ရမယ်။ သေသွားတဲ့လူတွေ အသက်ပြန်မရှင်တော့ဘူး။”
“ကျွန်တော်လဲ အဲလိုပဲ အဲဒီပုံကို ဘယ်သူတွေကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးဖို့ ပို့ခဲ့တာပဲ ဒီလိုနေရာမှာ တလွဲ အသုံးချဖို့ ပေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး ရှင်းပြ မနေချင်တော့ဘူး။ ”
“ငါမှားတဲ့ အဓိက အမှားက ဒိုက်နမိုက်ကို တီထွင်ခဲ့လို့ မဟုတ်ဘူးကွ။ လူတွေကို ဟယအဲလောက် ရက်စက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မထားခဲ့မိလို့”
“ကျွန်တော်လဲ အဲဒီဓာတ်ပုံကို ရိုက်လိုက်တဲ့ အချိန်အထိ အမှားသေးဘူး။ လူတိုင်းကို ကိုယ့်စိတ်နဲ့ နှိုင်းလိုက်မှ မှားသွားတာ”
“ အေးမိုးလဲ အတော်ချုပ်နေပြီ ငါပြန်တော့မယ်”
ထို့နောက် နိုဗယ်သည် လက်ကျန် ဘီယာလေးကို မော့သောက်ပြီး
“မင့်ကို မှာစရာ တစ်ခုရှိသေးတယ်။ ကိုယ်က ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုနဲ့ ဖန်တီးခဲ့ပေမယ့်။ အသုံးပြုတဲ့ လူတစ်ချို့ တခြားနေရာမှ တလွဲ အသုံးချတတ်တယ်ဆိုတာ မသေမချင်း မှတ်ထားပေတော့”
ထိုသို့ မှာပြီးနောက် နိုဗယ်သည် ကျွန်တော့်ကို ကျောခိုင်းကာ နှင်းမြူကြားထဲသို့ တဖြေးဖြေးချင်း တိုးဝင်း ပျော်ကွယ်သွာပါတော့သည်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 4:45 PM
ဟုတ်ပါတယ်.. ကိုယ်ကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖန်တီးပြီးမှ သူများအလွဲသုံးစားလုပ်တာခံရတာ တော်တော်စိတ်ပျက်ဒေါသထွက်ဖို့ကောင်းမှာပဲ...
အောက်တန်းကျတဲ့သူအများစုကလဲ အရည်အချင်းမရှိဘဲ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့သူတွေပါဗျာ
အိုင်နိုး အိုင်နိုး ယူမနိုးသေးရင်တော့ ဆက်အိပ်နေဦး :P just kidding
This is good post about your thinking and explanation. :)
ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ အသုံးချသူအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တန်ဘိုးကွဲသွားတယ်
Happy Birthday မေမေ